Global Voices teny Malagasy » Nanapa-kevitra Ny Tsy Hiafina Intsony Ny Tovovavy Afrikana Tatsimo Iray Mitondra Ny Tsimok’Aretina VIH · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:39 GMT 1	 · Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Tanora
Saidy Brown, vehivavy Afrikana Tatsimo 22 taona nanambara fa voan'ny SIDA izy tao amin'ny Twitter. Sary: Twitter
Nidera an'i Saidy Brown, vehivavy Afrikana Tatsimo 22 taona, ireo mpisera aterineto manerana izao tontolo izao , izay nampiasa ny Twitter tamin'ny volana lasa mba amoahany  fa mitondra ny tsimok'aretina VIH izy.
Niaina ny tsimok'aretina nandritra ny fiainany iray manontolo i Brown, araka ny filazan'ireo ray aman-dreniny, kanefa efa ho zatovo izy vao nahafantatra fa teraka niaraka tamin'ilay aretina.
Tamin'ny volana lasa, nanapa-kevitra ny hamoaka ny tantaram-pahavelomany ampahibemaso izy raha nandefa sioka hoe:
Rehefa nahafantatra aho teo amin'ny faha 14 taonako fa mitondra ny tsimok'aretina VIH, dia tsy nihevitra ny ahatratra ny faha 18 taona, handray 22 taona aho izao amin'ity taona ity. ❤❤
Ao Afrika Atsimo no foiben'ny tsimok'aretina VIH eto amin'izao tontolo izao araka ny Avert,  izay fikambanana mpanao asa soa miasa amin'ny fisorohana ny fihanaky ny VIH. Roa taona lasa izay, nisy tranga fifindran'ny aretina VIH vaovao miisa 380.000 tao amin'ny firenena, izay efa ahitana mponina voan'ny SIDA miisa 7 tapitrisa. Olona hatramin'ny 180.000 ao Afrika Atsimo no matin'ny aretina SIDA tamin'ny taona 2015 .
Nilaza ny Orina Mpanasoa mikarakara ny SIDA ao Afrika Atsimo fa mihanaka ny VIH ao an-toerana noho ny  fahantrana, ny tsy fitoviana, ny korontana ara-tsosialy, ny firaisana ara-nofo tsy voaaro miely patrana, ny satan'ny vehivavy ambany , ny herisetra ara-nofo, ny asa mifindrafindra monina, ny fitsaboana voafetra sy tsy mitovy, ary ny fitantanana ratsy manoloana ny valan'aretina.
Nahita  ny fanadihadiana  antsoina hoe “Ny Tondro Fanilikilihan'Ireo Olona Miaina miaraka amin'ny VIH Ao Afrika Atsimo,” izay novitain'ny Vaomieran'ny Fikarohana ny Siansan'Olombelona fa miaina fanilikilihana avy amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ny olona iray amin'ny telo miaina miaraka amin'ny VIH ary voahilikilika kokoa  mihoatra  ny lehilahy ny vehivavy .
Tsy mahagaga àry raha nahazo dera avy amin'ny mpisera Twitter maro ny herimpon'i Brown nanokatra ny mikasika azy tao amin'ny media sosialy. Nanoro hevitra mihitsy aza ny mpisera Twitter iray, “Wako Joel,” fa tokony atao ambasadaoron'i Afrika amin'ny resaka VIH / SIDA izy:
HEVITRO: Mihevitra aho fa tokony hatao ambasadaoron'ny # Afrika amin'ny resaka #VIH_SIDA  ilay #AfrikanaTatsimo  @saidy_brown  mba hanao kabary amin'ny sehatra iraisampirenena.
Nilaza ilay mpanakanto Ogandey , Gitts Beats, fa tokony ho ohatra ho an'ny hafa ny herimpon'i Brown:
Tokony ho miavaka isika indraindray amin'ny zava-drehetra ary tsy misalasala ny milaza izay ao an-tsaintsika, raha nilaza izany i @saidy_brown omaly dia afaka milaza izany ianao anio
Nanoratra i Sibusiso Msesiwe hoe:
@saidy_brown avy namaky ny lahatsoratrao aho. Nitomany aho satria vao avy nandevina ny fianakaviako noho ny SIDA.
Midera anao aho .
Tiako loatra ianao!
Nisaotra an'i Brown noho ny herimpony i Della Rovere:
@saidy_brown  ianao akia no sampiko !!! Mahatalanjona sy mahery ianao !!! Misaotra anao noho ity anatra momba ny fiainana ity
Tompon-daka amin'ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH i Brown hoy i Mark Gamanya tamin'ny alalan'ny fanampiana ny hanova ny fomba fijerin'ny vahoaka momba ny aretina:
@saidy_brown, tsy misy afa-bela amin'ny VIH/SIDA, ianao no tompon-daka amin ‘ireo izay miaina fanilikilihana, ataovy hatrany ny fanabeazana ho an’ ireo izay tsy mahafantatra.
Tsapa manerana izao tontolo izao ny fiantraikan'ny aingam-panahy avy amin'ny lahatsoratr'i Brown :
@saidy_brown  namaky ny tantaranao tao amin'ny tranonkala BBC aho .
Mety ho tena olombelona mahagaga ianao!
Mirary fiadanana, fahasalamana sy fahombiazana ho anao aho. 👏👏👏👏👏
Raha manana olana ianao amin'ny faminavinana ny fanilikilihana atrehin'ireo mararin'ny VIH any Afrika Atsimo, dia saino izao fanontaniana manaraka izao izay napetraky ny mpisera Twitter iray tsy fantatra anarana tamin'i Brown :
@saidy_brown  raha lasa mitondra ny tsimok'aretina VIH ianao noho ny firaisana ara-nofo, moa ve ianao maherifo tahaka izao ihany?
Ary avy eo, mba jereo kely ny valin-teniny:
Eny. Ka mampaninona moa izay fomba nahavoa ilay olona? Rehefa VIH dia VIH.
Eny tokoa, mpisera Twitter iray monja no niadihevitra tamin'ny fanontaniana lôjikan'i MMaenza1 :
Miala tsiny aho ry @MMaenza1  fa ahoana moa no fomba hanampian'ny fanontanianao ny olan'ny #VIH  manerantany ? Miombon-kevitra amin'i @saidy_brown  aho moa maninona izay fomba nahazoana azy?
Nanao izao fanamarihana manaraka izao i Michael Très avy any Etazonia:
@Nala_RSA  @saidy_brown  Andriamanitra anie hitahy anao! Mihevitra aho fa miezaka isika ny hampahafantatra an'izao tontolo izao fa MBOLA misy ny fahavelomana na dia ao anatin'ny toe-javatra maizina indrindra aza!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/17/96918/
 araka ny Avert,: https://www.google.co.zm/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU_ZzgrbzSAhXI6xQKHYO3C1oQFgg3MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.avert.org%2Fprofessionals%2Fhiv-around-world%2Fsub-saharan-africa%2Fsouth-africa&usg=AFQjCNFegO2M4PwYtY7u1g2TzfZnm1Tlng
 noho ny: https://www.aids.org.za/hivaids-in-south-africa